Kudanwa kweDuty Nhare Mwaka 8: Mepu yeBlackout yakasimbiswa yenguva inotevera yeCODM
Kudanwa kweDuty Mobile Mwaka 7 Iwo Elite weElite asvika kumagumo uye isu takagadzirira kutanga kweMwaka 8. Uchayeuka kuti kuverenga kwemwaka kwakagadziriswazve neMwaka 1, New Order, pane kuve nemwaka. 14. Mwaka unotevera wa2021 uchave Mwaka 8. Hezvino zvese zvaunoda kuti uzive nezve Inotevera Mwaka weKudaidzwa kweDuty Nhare. Ko CoD Mobile ichaitika rini… [Verenga zvakawanda ...] nezve Kudanwa kweDuty Mobile Mwaka 8: Mepu yeBlackout yakasimbiswa mwaka unotevera weCODM
Hezvino zvese zvatinoziva nezve Forza Horizon 5 pa Xbox nePC
Forza Horizon 5 iri kutogadzira nyaya yayo semutambo wegore Forza Horizon ndiyo yakavhurika-yepasirese kune yakasarudzika Xbox Forza racing franchise. Forza Horizon 5 inotevera yakanyanya kubudirira uye yakajeka Forza Horizon 4, uye ichave ichinyatso kumisikidza iyo yakanakisa Xbox mijaho mitambo uye akanakisa emitambo yePC emitambo kwemakore anouya. Nhandare dzeNhandare uye Xbox Game… [Verenga zvakawanda ...] nezve Hezvino zvese zvatinoziva nezve Forza Horizon 5 pa Xbox nePC
Gadzirisa Xbox Gadziridza Kodhi Kodhi 0x8B0500D0, 0x00000000, 0x90050005
Vamwe Xbox gamers vachiri kuyedza kugadzirisa software yekoni haigadzirise zvinobudirira, uye vangangosangana nekodhi yekukanganisa 0x8B0500D0, 0x00000000, 0x90050005 panguva kana kutevera iyo yekuvandudza, kana iyo koni inogona kusazotanga nemazvo mushure mekugadziriswa kwapera. Iyi posvo inopa mhinduro dzakakodzera kwazvo. Paunosangana nenyaya iyi, unozogamuchira zvinotevera zvizere… [Verenga zvakawanda ...] nezve Fix Xbox Dzokorora Kodhi Kodhi 0x8B0500D0, 0x00000000, 0x90050005
Microsoft Flight Simulator A-1H Skyraider Yakaziviswa Ipo MD-80 Mad Imbwa Inowana Vhidhiyo Inoratidza Kutora-Kubvisa
Nhasi vechitatu-bato vagadziri vaive vaburitsa pachena nezvekuuya kwendege yeMicrosoft Flight Simulator. Chekutanga pane zvese, Mauto Ekuona (Milviz) akazivisa iyo Douglas A-1H Skyraider, iro basa revarwi veUS Navy kubva kunopera makumi mana kusvika kuma40. Parizvino, tinongowana chete Screenshots mbiri yejongwe yakavhenekerwa usiku, asi tinosungirwa kuona… [Verenga zvakawanda ...] nezveMicrosoft Flight Simulator A-1H Skyraider Yakaziviswa Kunyange MD-80 Mad Imbwa Inowana Vhidhiyo Inoratidza Kutora-Kubvisa
Maitiro Ekubatanidza Bluetooth Mutauri / Headphone kuNintendo Chinja
Iine yazvino sisitimu yekugadzirisa kune ese maviri maNintendo Chinja uye Chinja Lite, vashandisi zvino vaizoshandisa Makaralı Mutauri uye maHedifoni ane inotakurika yemitambo koni. Vazhinji vevashandisi veNintendo Shanduko vakafara kwazvo kunzwa nezve izvi sezvo chave chiri chimwe chezvinhu zvakakosha izvo zvisati zvapihwa. Vanhu vazhinji vanogona kunge vasingazive izvi. Zvakadaro, Nintendo akawedzera… [Verenga zvakawanda ...] nezve How To Connect Bluetooth Mutauri / Headphone kuna Nintendo Chinja
Vakuru Mipumburu Online kuti uve iwo mutambo wekutanga kushandisa Nvidia nyowani DLAA tech
Izvi zvakasimbiswa zviri pamutemo neCreative Director Rich Lambert. Iye ataura kuti tech nyowani kubva kuna Nvidia yaizotanga kupinda muvakuru Mipumburu Online. Inonzi iri kushandisa Kudzidza Kwakadzika Anti-Aliasing, inozivikanwawo seDLAA. Zvakare, mutambo uyu unenge uri kuwanawo tsigiro yeDLSS yekuita zvirinani pane anotsigirwa Graphics Kadhi. Iye zvino vanhu vazhinji vanogona kunge vakavhiringika pakati pe… [Verenga zvakawanda ...] nezve Elder Mipumburu Online kuve wekutanga mutambo wekushandisa Nvidia nyowani DLAA tech
Gran Turismo 7 Pre-Orders Kutanga Nemashoko paMabhonasi, Editions, uye PS4 kuPS5 Simudzira
Nhasi Sony Interactive Varaidzo yakazivisa kutanga kweadhijitari pre-maodha eGran Turismo 7, ichipawo ruzivo pane izvo zvatinogona kutarisira. Ese ma-pre-odhi kune vanotora chikamu vatengesi (kusanganisira neiyo PlayStation Chitoro) anokupa iwe zvinotevera zvinotevera (zvinoratidzwa pamusoro). Zvinotaurwa nemutengesiToyota Castrol TOM'S Supra Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth) Porsche 917K Living… [Verenga zvakawanda ...] nezve Gran Turismo 7 Pre-Orders Kutanga Nemashoko paMabhonasi, Editions, uye PS4 kuPS5 Simudzira
AMD Radeon Game Bundle Offer Yakaziviswa Inoratidzira Far Cry 6 Uye Resident Evil Village
Sechikamu cheiyo AMD Radeon Game Bundle Offer, iyo brand yazivisa zviri pamutemo nhasi kuti, kutanga nhasi, vatambi vanotenga yakamira-yega Radeon RX 6900 XT kadhi yemifananidzo - inosanganisira tsika dzakafukidzwa uye dzakaomeswa emvura mamodheru kubva ku AMD bhodhi vadyidzani - vanogashira kuwana kune iri kuuya Far Cry 6game naUbisoft. Pamwe chete nazvo, vangave vari zvakare kuwana Resident Zvakaipa… [Verenga zvakawanda ...] nezve AMD Radeon Game Bundle Offer Yakaziviswa Inoratidzira Far Cry 6 Uye Resident Evil Village
Shin Megami Tensei V weNintendo Shandura Inoratidza Kelpie's Gameplay muNew Trailer
Atlus aburitsa imwe turera inoratidza mutambo weiyo yeanopfuura mazana maviri+ madhimoni anozoonekwa mune yayo irikuuya JRPG Shin Megami Tensei V. Dhimoni rakaratidzirwa nhasi ndiKelpie, anga achiratidzika mune franchise kwenguva yakareba. Unogona kutarisa tirera pazasi. Iwe unogona zvakare kunakidzwa nezvasara zvenguva refu-inomhanya akateedzana ematrailer akatsaurirwa kumadhimoni… [Verenga zvakawanda ...] nezve Shin Megami Tensei V weNintendo Shandura Inoratidza Kelpie's Gameplay muNew Trailer
Nyowani Pokemon "Poke-Lid" Manholes muJapan Portray Raikou, Yamper, Magnemite, & Zvimwe
Rimwe guta reJapan rakaisa batch yeiyo inowedzera kufarirwa "Poke-Lids," yakanaka-enameled manhole machira anoratidza akakurumbira Pokemon. Mamwe mashanu maPoke-Lids akaiswa muHigashiosaka, zvichimaka yekutanga muOsaka Prefecture. Ivo vanoratidza inotevera Pokemon (inozivikanwa naRebecca Stone). Sezvineiwo, ese acho anemagetsi kana simbi… [Verenga zvakawanda ...] nezve New Pokemon "Poke-Lid" Manholes muJapan Ratidzira Raikou, Yamper, Magnemite, & Zvimwe